'ရည်းစားအသစ်ရရင် ပြောပြမယ်' နေခြည်ဦး - Yangon Media Group
Beauty Blogger တစ် ယောက်အနေနဲ့ လူသိများကျော် ကြားလာတဲ့ နေခြည်ဦးက (၂ဝ၁၈) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းထဲမှာ ရွှေ စင်ဦးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ် လုပ်ပြီး ဒါရိုက်တာမီးပွားရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်မှာ နေမင်း၊ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ နဲ့ တွဲဘက်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ သိ ရပါတယ်။
Q. ပထမဆုံးရိုက်ကူးမယ့် ရုပ် ရှင်အတွက် ရင်ခုန်သံက…
A. ဇာတ်လမ်းက မင်းသမီးနှစ် ယောက်အပြိုင်ဇာတ်လေးလည်းဖြစ် တယ်။ ဒါရိုက်တာဦးမီးပွားက အ သစ်တွေဆိုလည်း တအားသင်ပေး တတ်တယ်ဆိုတော့ နေခြည် အား ကိုးယုံကြည်ပါတယ်။ နေခြည်ကို ကမ်းလှမ်းတဲ့ ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင်ကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Q. ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ရော ဘယ် လို ညှိနှိုင်းမှုမျိုးရှိလဲ…
A. မကစ်နဲ့က နေခြည် ငယ် ငယ်လေးကတည်းက ခင်တယ်။ ဒါ ပေမဲ့ အခုဇာတ်လမ်းအတွက်တော့ အားလုံးဆုံပြီး မတွေ့ဖြစ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မကစ်က နေခြည်ကို အများ ကြီး သင်ပေးနိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသ မီးထဲမှာလည်းပါတော့ နေခြည် မ ကစ်ကို အားလည်းကိုးတယ်။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်းပိုရ တယ်။
Q. စစ်စိုးခရုနော် ဆိုတဲ့ Comment ကတော့ တော်တော်ရေပန်း စားသွားတယ်…
A. ကိုဖိုးလပြည့်နဲ့ နေခြည်ကို ဘယ်လိုအသက်အရွယ်ကွာတယ် ထင်ကြလဲမသိဘူး။ တကယ်က ငယ် ငယ်ကတည်းက တစ်ကျောင်းထဲ တွေ၊ သူက နေခြည်ထက် နှစ်နှစ် ကြီးတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခင်တယ်။ သူလည်းအခုဆို Music Video တွေလုပ်ရင်း တကယ့် Cele ဖြစ်နေပြီ။ နေခြည်ကို စနောက်ပြီး Cele တွေရေးတယ်။ နေခြည် ကလည်း စနောက်ပြီး ပြန်တင်ဖြစ် တာ၊ ဒီလောက်ပါပဲ။
Q. (၂ဝ၁၇)ခုနှစ်မှာ နေခြည် အတွက် အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးက ဘာဖြစ်မလဲ…
A. Beauty Blogger ဖြစ်တာ (၂ဝ၁၇)ခုနှစ်မှာဆိုတော့ နေခြည့် ဘဝ တကယ့်အချိုးအကွေ့ပဲ။ တစ် ခါမှ သာမန်မိန်းကလေး တစ် ယောက်က အခုလို မီဒီယာတွေက အင်တာဗျူးတွေဖြေရမယ်လို့ စိတ် ကူးထဲတောင် မထည့်ဖူးဘူး။
Q. အဲဒီအတွက် နေခြည် စွန့် လွှတ်လိုက်ရတာ ဘာဖြစ်မလဲ…
A. လွတ်လပ်မှုလို့ ထင်တယ်။ နေချင်သလိုနေလို့မရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိလာတယ်။ ဥပမာ အချစ်ရေးကအ စပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နေခြည်က ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းနေရတာလည်း ကြိုက် တယ်။ ခုကတော့ တစ်ယောက် တည်းပါပဲ။ တကယ်လို့ ရည်းစားအ သစ်ရရင်လည်း နေခြည်အရင်ဆုံး ပြောပြမှာပါ။